Fomba 7 hahaliana ny olona rehefa tsy tonga ara-dalàna izany - Blog
Raha nisy nangatahana hamaritana anao amin'ny teny iray, ny zavatra voalohany tonga tao an-tsainao dia tsy ho 'mazoto.'
Sahirana ianao hampiseho hafanam-po amin'ny zavatra.
Angamba any am-piasana io…
ahoana no ahalalanao fa tianao olona
Angamba ny lehibenao dia naneho hevitra momba ny fomba tsy hanomezanao ny asanao manontolo. Na miasa irery ianao ary mahita fa sarotra ny mametraka ny hafanam-po amin'ny orinasanao izay fantatrao fa mila mivoatra.
Na mety amin'ny fiainanao manokana izany…
Mety sahirana ianao hampiseho hafanam-po amin'ireo namanao, fianakavianao na mpiara-miasa aminao. Angamba mahatsapa hafahafa ny fientanam-po amin'ny fanoloran-kevitr'olon-kafa, hevitra na fankalazana fotoana lehibe eo amin'ny fiainany miaraka amin'izy ireo.
Ary angamba sarotra aminao ny mientanentana momba ny anao manokana…
Dia lavitra, fampiroboroboana, na zavatra mitranga amin'ny fiainanao izay mety hahatonga ny ankamaroan'ny olona hipoitra ny champagne corks dia aleony mandalo anao fotsiny mividy tsy misy fangarony, na tsy ekena mihitsy aza.
Angamba io voalaza etsy ambony io daholo.
Tsy dia maninona izany. Ny fanontaniana manandanja indrindra dia:
Ahoana no ahafahanao mazoto kokoa?
Tianao ny miova ny fomba fanaonao tsy dia misy fientanam-po amin'ny fiainana.
Te hanana hafanam-po amin'ny zavatra ianao. Tsy ny hampita fahatsapana olona tsara fotsiny rehefa mahatratra zavatra izy ireo, fa satria koa, raha tsorina, dia toa mahafinaritra kokoa noho ny fomba fiainanao izany.
Ny olon-kafa dia toa afaka miaina amin'izao fotoana izao ihany, mankafy ny fiainana, mahita ny mety sy ny mety, ary mankalaza ny zavatra tsara, na lehibe na kely.
Na dia mirona kokoa aza ianao hifantoka amin'ireo zavatra tsy dia tsara ary ho sarotra aminao ny hazoto, na inona na inona zavatra andrasanao zavatra, ny asa mafy nataonao hahazoana izany, na ny hafalianao momba izany lalina izany. midina.
Ka ahoana no ahafahanao mazoto kokoa? Na ny zavatra manjo anao, na ny hafa.
Ahoana no ampisehoanao amin'ny olon-kafa fa faly amin'ny zavatra iray ianao?
Ary ahoana no ahafahanao miditra amin'ilay fahatsapana hafanam-po sy fifaliana tena izy izay toa tonga ho azy amin'ny olona sasany?
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy handefasana hafanam-po amin'ny fiainanao.
1. Mifantoha amin'ny ankehitriny.
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny olona mitolona ho mazoto dia ny tsy fahatongavany eo amin'izao fotoana izao.
Mieritreritra foana ny zavatra tsy nety nataony omaly na tamin'ny herinandro izy ireo.
Ary raha tsy mifantoka amin'ny lasa izy ireo dia manahy ny amin'ny ho avy izy ireo ary ny zavatra rehetra azony ao amin'ny lisitry ny asany.
Sarotra ny mazoto amin'ny zavatra tena mitranga eo imasonao eto sy izao rehefa mieritreritra ny omaly na rahampitso ianao.
Ka ny dingana voalohany mankany amin'ny fahazotoana kokoa dia ny mampifantoka ny sainao anio.
Isaky ny mahita ny tenanao mieritreritra zavatra tsy mitranga amin'izao fotoana izao ianao, dia mitadiava fomba hamerenana ny tenanao.
Ny fandaniana fotoana hiainana lalina ary hifantohany amin'ny feo manodidina anao dia mety ho fomba iray lehibe hampisondrotana ny fahatsiarovanao.
Jereo manodidina anao ary mazotoa mailo ny hatsarana amin'ireo zavatra hitanao isan'andro.
Ataovy ny lisitr'ireo zavatra rehetra ankasitrahanao tamin'izany andro izany, na ireo zavatra rehetra azonao, na dia toa kely aza izany.
Izany dia hanampy anao hankasitraka bebe kokoa ny zavatra rehetra anananao sy ny zavatra manodidina anao, izay kosa hidika izany fa mahita zavatra mazoto bebe kokoa ianao.
2. Aza miahiahy kely.
Betsaka ny olona sahirana amin'ny hafanam-po amin'ny zavatra satria manahy foana momba ny hoe 'what ifs.'
Resy lahatra foana izy ireo fa misy zavatra tsy mety ary mifantoka amin'izany fa tsy amin'ny zavatra rehetra mety.
Raha afaka mampiofana ny tenanao ianao mba tsy hanahy be loatra ary handeha fotsiny amin'ny onja, dia ho mora lavitra kokoa ny hahatsapa ho mazoto amin'ireo zavatra tsara mitranga, na lehibe izany na kely, amin'ny fiainanao na ny fiainan'ny olona manodidina anao.
Ny fisaintsainana, ny fampihetseham-pofonaina ary ny drafitra hetsika tsara dia afaka manampy anao hametraka ny fanahianao amin'ny lafiny iray sy hankafy ireo zavatra tsara amin'ny fiainana raha maharitra izy ireo.
3. Ahenao ny zavatra antenainao.
Mety ho sahirana ianao hahatsapa hafanam-po amin'ny fiainana satria apetrakao ambony loatra ny bara ary mangataka be loatra.
inona ny tanjona tsara apetraka
Na dia tsara aza ny mikendry avo sy manosika ny tenanao amin'ny lafiny iray, raha manana antenaina bebe kokoa ianao dia tsy dia ho diso fanantenana ianao.
Amin'izany fomba izany, rehefa mandeha tsara kokoa noho ny antenainao ny zavatra, araka ny mahazatra azy ireo, dia hahatsapa ho feno hafanam-po bebe kokoa noho ianao ianao raha toa ka manapa-kevitra ianao fa manana tendrombohitra lehibe kokoa hianika.
Izany rehetra izany dia ny fitokonana mpanelanelana amin'ny tontolo tsy mahafinaritra eo amin'ny tenanao ary alao antoka fa manana zavatra hankalazana ianao rehefa mandeha tsara ny raharaha.
4. Atsaharo ny fialonana.
Ny tsy fahampian'ny hafanam-po amin'ny zava-bitan'ny hafa indraindray dia misy ifandraisany amin'ny fialonana.
Raha fitsiriritana ny fientanam-ponao rehefa maheno ny vaovao tsara an'ny hafa ianao, dia voajanahary izany fa tsy hamaly am-pahavitrihana ianao.
Raha hitanao fa sahirana amin'ny fialonana ianao, dia ny dingana voalohany tsara mety dia ny famerana ny fampiasanao ny media sosialy.
Fantatsika rehetra fa ny ankamaroan'ny olona dia mizara ny entana tsara ihany fa tsy ny tolona ataon'izy ireo.
Fa rehefa mahita sarin'olona tsy manam-piafarana toa mahavariana amin'ny fiainana ianao dia mety ho sarotra ny mitazona izany amin'ny fomba fijery ary manakana ny tenanao tsy hialona.
Noho izany, ny fihemorana na ny fampihenana ny fampiasanao ny media sosialy dia mety ho tsara amin'ny famolavolana ilay biby maitso maso.
Raha maheno ny vaovao mahafaly ataon'ny olona ianao fa tsy amin'ny Internet dia ho mora lavitra kokoa ny hientanentanana ho azy ireo. Ary ianao koa dia mety handre momba ny lalana be vato izay nitondra azy ireo tamin'ny tanjon'izy ireo, izay hametraka ny zavatra ho anao.
Na amin'ny media sosialy izany na amin'ny tena fiainana dia miezaha hampitsahatra ny fandrefesana ny fiainanao manokana sy ny zava-bitanao manohitra ny an'ny olona manodidina anao.
5. Saintsaino ny fiainanao, ny tanjonao ary ny fahasambaranao.
Raha sahirana ianao hampiseho hafanam-po amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao, na dia hetsika lehibe toy ny fandehanana amin'ny fialantsasatra amin'ny fahavelomanao ihany aza, fahazoana io fampiroboroboana lehibe io, na vaovao be ao amin'ny fianakavianao, dia mety ho fotoana tokony hisaintsainana izany.
Angamba ianao olona tony sy milamina fotsiny izay mahatsapa fahasambarana fa tsy mahazo hafanam-po be loatra amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy maninona.
Fa ilaina ny mandinika raha ny tsy fahampian'ny hafanam-ponao amin'ny fiainana dia mety ho vokatry ny tsy fahasambarana na tsy fahafaham-po.
Makà fotoana kely handinihana ny lalanao eo amin'ny fiainana. Ny zava-bitao ary ny kendrenao. Eritrereto izay mety ho tsy eo ary raha mila manova ianao.
Mety ho fanovana kely iray amin'ny fomba fiainanao dia mety hanisy fiovana lehibe amin'ny fomba fijerinao ny fanantenana. Ary, andao hatrehana izany, raha mahatsapa ho be fanantenana kokoa ianao dia azo inoana fa ho mazoto kokoa.
6. Aza manahy ny amin'ny fomba hahitanao azy.
Angamba olona be zotom-po ianao ao anaty nefa tsy tianao ny mampiseho azy satria saro-kenatra sy mankahala ny fifantohana aminao ianao.
Ka tsy manao fampisehoana lehibe ny zava-bitanao na ny herinao anaty noho ireo zavatra mety hataonao. Tazoninao fotsiny anaty tavoahangy izany.
Na dia mety ho toetranao voajanahary aza izany, dia mamaky ity lahatsoratra ity ianao hianaranao ny hafanam-po bebe kokoa, ary mety tafiditra ao anatin'izany ny fanosehana any an-dafin'ny faritra misy anao.
Ny zavatra tsy maintsy tsapanao dia hoe rehefa maneho ny hafanam-pony amin'ny zavatra iray ny olona iray, dia saika mandoko sary tsara an'io olona io foana. Tsy misy olona hieritreritra zavatra hafa afa-tsy eritreritra tsara momba anao raha asehonao fa mafana fo ianao.
7. Sasao mandra-panamboaranao azy.
Eny ary, ka ny mody miseho ho zavatra tsy anao dia tsy torohevitra tsara foana. Saingy, amin'ity tranga ity, ny mody mazoto kokoa noho ny tena anao dia afaka mitondra fahasamihafana bebe kokoa noho ny noeritreretinao.
Eritrereto ho toy ny fampiofanana ny tenanao hahatsapa hafanam-po kokoa amin'ny zavatra.
Mety mila manery ny tenanao ianao hanao izany, fa rehefa misy vaovao mahafaly ny olon-kafa, andramo ny manoratra fanehoan-kevitra arahabaina ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo, mividy zavatra kely holazaina tsara, mandefa karatra, mamihina azy ireo (miaraka amin'ny fanekeny) , manolotra sakafo fankalazana…
Amin'ny anao manokana, manosika ny tenanao hizara ireo zava-bitanao amin'ireo tianao sy hanolotra soso-kevitra fankalazana, na makà fotoana kely fotsiny hifalifaliana amin'izay vitanao ary asio marika ny fotoana amin'ny fomba sasany.
Raha azonao atao ny mandray na dia ny toro-hevitra roa aza etsy ambony, dia tsy maintsy manomboka tena faly ianao amin'ny zavatra tsara rehetra amin'ny fiainana.
Ary izany, raha ny tenany, dia zavatra mendrika hankalazana.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hafanam-po? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fomba hahaliana kokoa, tsy mankaleo: 15 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
rehefa milaza aminao ny lehilahy manambady fa tia anao izy
inona no hatao rehefa mahatsiaro irery ianao amin'ny tokantranonao
ny zavatra tiako amin'ny lehilahy
ahoana no hahalalana hoe tapitra io